1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Tune UP Project Ingxenye Izinombolo kanye Izindleko | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Tune UP Project Ingxenye Izinombolo kanye Izindleko
Ngithole ukuthi uchungechunge lwe-NAPA lwezitolo zezingxenye zezimoto lunikeze ikhathalogi yezingxenye zasolwandle futhi kwangimangaza ukuthi babenezingxenye eziningi zasolwandle engangizidinga zazisesitokweni seNAPA Distribution Centre. Esinye isitolo sezingxenye zezimoto iCarQuest sine- "Sierra Marine Parts Catalog" yaso into efanayo nezinombolo zezingxenye ezifanayo ezisetshenziswa yiNAPA. Ukuthola ukuthi yiziphi izingxenye ezidingekayo bekuyinselele, kepha lapho sengazi ukuthi ngidingani, i-NAPA ikwazile ukuzitholela lezo zingxenye ngokushesha. Ufuna futhi ukuthola umthengisi wezingxenye ezinhle zasolwandle ze-OMC Johnson / Evinrude neMercury. Angithandi ukuthenga izinto kumthengisi wesikebhe futhi ngikhokhe amanani abo okuthengisa aphezulu, kepha kunezingxenye ezithile zasolwandle ongafika kuzo kuphela. Kunezindawo eziningana kuwebhu, kepha udinga ukuthi uqiniseke ukuthi uyazi ukuthi okuthengayo empeleni yilokho okudingayo. Inkinga ngalaba bathengisi ukuthi bahlose ukuthengisa izingxenye zezimoto ezahlukahlukene.
Thenga eduze ngokuchofoza kumasayithi abhalwe kwesobunxele. Sesha Izinombolo Zengxenye ye-OMC bese uqhathanisa amanani.
Okubalwe ngezansi kunezingxenye ezisetshenziselwa ukuhlenga i-1963 3 HP Evinrude Lightwin Outboard Boat Motor yami. Kunethuba elihle lokuthi lezi yizingxenye zasolwandle ezifanayo ozozidinga kumoto yakho, kepha kufanele uqinisekise izinombolo zezingxenye zemoto yakho engaphandle.
Izindleko eziphelele ngoba Izingxenye: $ 96.62 plus Tax at Napa
Siza ukusekela le sayithi:
Chofoza lapha ukuze uyothenga le ngxenye ku Amazon.com
Chofoza lapha ukuthenga le ngxenye ku-ebay.com
Shona Gasket Inombolo yengxenye ye-OMC 203130 NAPA Ingxenye yeNombolo 18-3841-1